Mimwe yakavhurwa sosi maturusi ekugadzira akadzika nzvimbo | Linux Vakapindwa muropa
Mune Nyaya yapfuura Ini ndanga ndavataurira nezve static mawebhusaiti uye isu takamirira iyo kufungidzirwa kweakavhurika sosi maturusi ekugadzira iwo
Sezvandambotaura panguva iyoyo, nzvimbo dzakadzika hadzi shanduke, mutsauko nenzvimbo dzinesimba ndedzekuti chero gadziriso inoitwa pane komputa yemutengi, kwete pane server. Zvikasadaro, iwo mafaera anoratidzwa nevhavha kumutengi zvakangofanana neaya akaiswa kubva pakomputa yemusiki.
1 Mimwe yakavhurwa sosi maturusi ekugadzira nzvimbo dzakadzika
Mimwe yakavhurwa sosi maturusi ekugadzira nzvimbo dzakadzika
Kana iwe ukakopa chero mapurojekiti kubva kuGitHub, pamwe unoziva GitHub Mapeji, iyo saiti yekugadzira uye yekutambira sevhisi iyo iyo Microsoft repository maneja inopa kune mapurojekiti akaitirwa imomoiwe. Zvakanaka, mapeji akagadzirwa ne Jekill
Kugadzira masaiti neJekill pChero kugoverwa kweLinux kunogona kushandiswa inosangana nezvinodiwa zvinotevera:
Ruby programming mutauro mune vhezheni 2.5.0 kana yepamusoro, kusanganisira ekuvandudza maraibhurari.
RubyGems package maneja.
GCC uye Ita.
Markdow inoshandiswa kuumbiridza zvinyorwan apo pZvekugadzira matemplate, iwe une chishandiso chinonzi Liquid.
Mhedzisiro yacho inobuda muchimiro cheHTML neCSS mafaera.
Kune mapulagini evakakurumbira maneja zvemukati izvo zvinokutendera iwe kuti utamire zvirimo zveblog rako kuenda kuJekill kunyangwe iwe uchafanirwa kushandisa chikuva senge Disquis kugamuchira makomendi.
Imwe poindi yekuchengeta mupfungwa kuti kana iwe uchida vanoona vapepeti kunyora yako blog positi,
Se tsanangura kwaari se "imwe yeanonyanya kufarirwa masosi masosi ekugadzirwa kwenzvimbo dzakadzika" uye pawebhusaiti yake vanovimbisa kuti ndiyo "inomhanyisa." Senge sekunge zvipikirwa zvaive zvisina kukwana, vavaki vayo vanoti zvakagadzirirwa kuita dhizaini yewebhu kunakidza zvakare
Izvo zvakanyorwa muGo, yakavhurwa sosi programming mutauro unochengetwa neGoogle uye nharaunda yakazvimirira yevagadziri.
Zvimwe zvehunhu hwayo ndeizvi:
Kurumidza peji chizvarwa (isingasviki miniti)
Inoshanda paWindows, Linux uye Mac.
Tsigiro yekugadzirisa matemplate.
Tsigiro yeiyo Disquis yekutaura chikuva.
Tsigiro yeGoogle Analitycs.
Kugadzirwa kwemamenyu akasimba.
Hugo inogona kushandiswa kune ese marudzi emawebhusaiti uye inoenderana neakanyanya kufarirwa webhu kubata masevhisi.b.
Yakagadzirirwa chaizvo kublogi, Iyo yakavakirwa paNode.JS, iyo Javscript nguva yekumhanyisa yakavakirwa paGoogle Chrome inopa injini.
Izvo chete zvinodiwa kuti ushandise Hex ndiyo iyo Iyo yekushandisa sisitimu ine Node.js yakaiswa kubva mushanduro 10.13, kunyange ichikurudzirwa kushandisa vhezheni 12 uye kumusoro.
Kurumidza peji chizvarwa. Ivo vanovimbisa kugadzirisa mazana emafaira mumasekondi.
Chizvarwa chemasaiti chine murairo mumwe chete.
Mhando dzakasiyana dzeMarkdown dzinogona kushandiswa
Yakasimba application programming interface yekuwedzera maitiro ayo.
Tsigiro kuburikidza nemapulagini enjini dzakasiyana dzeetemplate senge JS, Pug, Nunjucks pakati pevamwe.
Kubatanidzwa pamwe nekuwedzera kweNPM mapakeji akadai seBhabheri, PostCSS, Zvishoma / Sass, nezvimwe.
Vanopfuura mazana matatu misoro inogadziriswa.
Chizvarwa chemapeji eHTML kubva pane zvinyorwa zvakanyorwa uchishandisa Markdown uye MDX.
Kushandiswazve kwekodhi yakanyorwa uchishandisa React
Otomatiki dudziro yezvinyorwa zvakagadzirwa pakati pemitauro makumi manomwe.
Kugadzira uye kugadzirisa akasiyana mavhezheni egwaro.
Kutsvaga kuri nyore mukati megwaro rega uchishandisa Algolia yekutsvaga injini.
Yakagadzirirwa enjini dzekutsvaga. Mafaera eHTML akagadzirwa nenzira imwe neimwe inogoneka
Yakananga peji SEO
Ikozvino pane mavhezheni maviri eDocusaurus anotenderera, Iyo yekubatanidza inoshandiswa mune ino chinyorwa inoenderana neshanduro yechipiri inova iyo yakakurudzirwa nevakagadziri vewebhusaiti nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mimwe yakavhurwa sosi maturusi ekugadzira akadzika masayiti